မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလစာကို ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ
30 Nov 2017 . 1:46 PM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံတစ်နေ့လုပ်ခဟာ ၃၆ဝဝကျပ် (၂.၆၃ ဒေါ်လာ) ဖြစ်ပြီး တစ်နာရီလုပ်ခဟာ ၄၅ဝကျပ် (ဝ.၃၂၉ ဒေါ်လာ) ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလစာဟာ ၁ဝ၈,ဝဝဝ ကျပ် (တစ်သိန်းရှစ်ထောင်ကျပ်) ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလစာဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
(၁) သြစတေးလျနိုင်ငံ (Australia)
သြစတေးလျနိုင်ငံ (Australia) နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လုပ်ခလစာအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆,၈၆၂ အထိရှိပြီး အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၂၃၉ (၃,ဝ၅၃,၃၁၄ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ အခြေခံလစာဟာ မြန်မာငွေသိန်း၃ဝကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ဗျာ။
(၂) လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ (Luxembourg)
ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ (Luxembourg) ဟာ သေးငယ်ပေမယ့် အလုပ်သမားတွေအတွက် နေချင်စရာပါ။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇,၁၅၂ အထိရှိပါတယ်။ သြစတေးလျနိုင်ငံထက် အနည်းငယ်များတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံက အခွန်ကောက်နှုန်းများနေတဲ့အတွက် ဒုတိယဖြစ်သွားတာပါ။ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အနည်းဆုံးလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၂၆၃ (၃,ဝ၈၆,၂၇၇ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေတောင်မှ သိန်း၃ဝကျော်ရတယ်ဆိုတော့ . . . ။
(၃) မိုနာကိုနိုင်ငံ (Monaco)
ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ ဘေးချင်းကပ်နေတဲ့ မိုနာကိုနိုင်ငံ (Monaco) ရဲ့လူဦးရေဟာ ၄သောင်းနီးပါးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်ငံငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ မိုနာကိုနိုင်ငံက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၉၅၇ (၂,၆၆၉,၆၈၉ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် အနည်းဆုံး ၂၆သိန်းလောက် ရမှာမို့လို ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာ။
(၄) ပြင်သစ်နိုင်ငံ (France)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ (France) ရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ဝ,ဝ၇၁ ရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၆၇၃ (၂,၂၈၁,၄ဝ၃ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ သာမန်ဝန်ထမ်းလုပ်ရုံနဲ့ ၂၂သိန်းကျော်ရမှာဆိုတော့ ရင်ခုန်စရာကြီးပါ။
(၅) နယူးဇီလန်နိုင်ငံ (New Zealand)
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ (New Zealand) ရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂,၁ဝ၅ အထိရှိပါတယ်။ ဒီနှုန်းထားဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံထက် မြင့်မားပေမယ့် အခွန်ကြေးမြင့်တဲ့အတွက် ပဉ္စမနေရာမှာ ထားတာပါ။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၇၃၆ (၂,၃၆၇,၉ဝ၄ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရုံနဲ့ အနည်းဆုံး ၂၃သိန်းရမှာနော်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ (New Zealand)
ကဲ . . . . အခုဖော်ပြလိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေက ကမ္ဘာ့လစာအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်အများဆုံးသွားလုပ်ကြတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် ဘယ်လောက်ထိရနိုင်လဲ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ (Singapore) မှာ အခြေခံလုပ်ခ တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခြွင်းချက် (၂) ခုရှိပါတယ်။
(၁) သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေကို အခြေခံလစာ ဒေါ်လာ ၁,ဝဝဝ (၁,၃၆၄,ဝဝဝ ကျပ်) အနည်းဆုံးပေးချေရမယ်လို့ ၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကို အခြေခံလစာ ဒေါ်လာ ၁,၁ဝဝ (၁,၅ဝဝ,၄ဝဝ ကျပ်) အနည်းဆုံးပေးချေရမယ်လို့ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောက စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း (ဒါမှမဟုတ်) လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း သွားလုပ်ရုံနဲ့ အနည်းဆုံး ၁၃သိန်းလောက်ရနိုင်တဲ့သဘောပါ။
အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ (Thailand) ရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၆၅၂ ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေခံလစာက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၁ (၃ဝ၁,၄၄၄ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ မြန်မာကျပ် ၃သိန်းနီးပါးရတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထက်စာရင် ၃ဆနီးပါး ပိုများတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အခြေခံတစ်နာရီလုပ်ခကို ၈၂၃ယန်း (၉,၉၈၃ ကျပ်) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တစ်နာရီလုပ်ရုံနဲ့ အနည်းဆုံးတစ်သောင်းနီးပါး ရမှာပါ။ တစ်ပတ်အလုပ်ချိန် နာရီ (၄ဝ) သတ်မှတ်ထားပြီး အခြေခံလစာဟာ ၁၃၁,၆၈ဝ ယန်း (၁,၅၉၇,၂၈ဝ ကျပ်) အထိ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူထက်စာရင် ဂျပန်နိုင်ငံက လစာပိုများတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာဒေသအပေါ်မူတည်ပြီး တိုကျိုမြို့ (Tokyo) ၊ ကာနာဂါဝါမြို့ (Kanagawa) နဲ့ အိုဆာကာမြို့ (Osaka) တွေမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက လစာပိုများပါတယ်လို့ သိရပြန်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံလစာသတ်မှတ်ချက်ဟာ နေရာဒေသပေါ်လိုက်ပြီး ကွာခြားပါတယ်။ ပင်နီဆူးလားကျွန်း (Peninsula) ပေါ်မှာရှိတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ အခြေခံလစာ ရင်းဂစ် ၁,ဝဝဝ (၃၃၃,၇၅၆ ကျပ်) ပေးချေရမယ်လို့ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လတုန်းက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆာဘားပြည်နယ် (Sabah) ၊ ဆာရာဝက်ပြည်နယ် (Sarawak) နဲ့ ဘာဘူအမ်ပြည်နယ် (Labuan) တွေမှာတော့ အခြေခံလစာ ရင်းဂစ် ၉၂ဝ (၃ဝ၇,ဝ၄ဝ ကျပ်) သာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် အနည်းဆုံး ၃သိန်းဝန်းကျင်ရနိုင်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ (South Korea)
အခုနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ (South Korea) ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ ကဲ . . . ဒါဆို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အနည်းဆုံးလုပ်ခက ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါပြီ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အခြေခံလုပ်ခကို နှစ်စဉ်တိုးမြှင့်လေ့ရှိတာပါ။ အခြေခံတစ်နာရီလုပ်ခဟာ ဝမ် ၆,၄၇ဝ (၈,ဝ၉၇ ကျပ်) အဖြစ် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ဝ၁၈ခုနှစ်ရောက်ရင်တော့ အခြေခံတစ်နာရီလုပ်ခဟာ ၇,၅၃ဝ ဝမ် (၉,၄၂၃ ကျပ်) ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ တစ်ပတ်အလုပ်ချိန် နာရီ (၄ဝ) သတ်မှတ်ထားပြီး ၂ဝ၁၈ခုနှစ်မှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံလစာဟာ ၁,၂ဝ၄,၈ဝဝ ဝမ် (၁,၅ဝ၇,၆၈ဝ ကျပ်) ဖြစ်ပါပြီ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ရုံနဲ့ အနည်ဆုံး ၁၅သိန်းလောက်ရမှာဆိုတော့ မျက်စိကျချင်စရာပါပဲ။
ကဲ . . . . . အခရာပရိသတ်ကြီးရေ . . ကမ္ဘာပေါ်မှာ လုပ်ခလစာအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခြေခံလုပ်ခတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပြထားတာပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းထဲမှာ နိုင်ငံခြားကို အလုပ်ထွက်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်း အခြေခံလုပ်ခအကြောင်းကို လက်တို့ပြောလိုက်ပါဦး။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့အခွခေံလစာကို ပွညျပနိုငျငံတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့တဲ့အခါ ဘယျလိုကှာခွားလဲ
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခွခေံတဈနလေု့ပျခဟာ ၃၆ဝဝကပျြ (၂.၆၃ ဒျေါလာ) ဖွဈပွီး တဈနာရီလုပျခဟာ ၄၅ဝကပျြ (ဝ.၃၂၉ ဒျေါလာ) ရှိတယျလို့ သတျမှတျထားပါတယျ။ အဲဒီတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အခွခေံလစာဟာ ၁ဝ၈,ဝဝဝ ကပျြ (တဈသိနျးရှဈထောငျကပျြ) ရှိတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အခွခေံလစာဟာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ဘယျလောကျထိရှိလဲဆိုတာ ကွညျ့ရအောငျ။
(၁) သွစတေးလနြိုငျငံ (Australia)
သွစတေးလနြိုငျငံ (Australia) နိုငျငံဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ လုပျခလစာအမွငျ့ဆုံးနိုငျငံလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။ အလုပျသမားတှရေဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၆,၈၆၂ အထိရှိပွီး အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂,၂၃၉ (၃,ဝ၅၃,၃၁၄ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ သွစတေးလနြိုငျငံမှာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျနတေဲ့ အခွခေံလစာဟာ မွနျမာငှသေိနျး၃ဝကြျောရှိတယျဆိုတော့ စဉျးစားသာကွညျ့တော့ဗြာ။
(၂) လူဇငျဘတျနိုငျငံ (Luxembourg)
ဥရောပတိုကျမှာရှိတဲ့ လူဇငျဘတျနိုငျငံ (Luxembourg) ဟာ သေးငယျပမေယျ့ အလုပျသမားတှအေတှကျ နခေငျြစရာပါ။ အလုပျသမားတှရေဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၇,၁၅၂ အထိရှိပါတယျ။ သွစတေးလနြိုငျငံထကျ အနညျးငယျမြားတယျလို့ ဆိုနိုငျပမေယျ့ လူဇငျဘတျနိုငျငံက အခှနျကောကျနှုနျးမြားနတေဲ့အတှကျ ဒုတိယဖွဈသှားတာပါ။ လူဇငျဘတျနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့အနညျးဆုံးလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂,၂၆၃ (၃,ဝ၈၆,၂၇၇ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ သူတို့နိုငျငံမှာ အောကျခွဝေနျထမျးတှတေောငျမှ သိနျး၃ဝကြျောရတယျဆိုတော့ . . . ။
(၃) မိုနာကိုနိုငျငံ (Monaco)
ပွငျသဈနိုငျငံနဲ့ ဘေးခငျြးကပျနတေဲ့ မိုနာကိုနိုငျငံ (Monaco) ရဲ့လူဦးရဟော ၄သောငျးနီးပါးပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရနိုငျငံငယျဖွဈတဲ့အတှကျ ဝနျထမျးတှကေို အကောငျးဆုံးထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ မိုနာကိုနိုငျငံက ဝနျထမျးတှရေဲ့အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁,၉၅၇ (၂,၆၆၉,၆၈၉ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ သူတို့နိုငျငံမှာ အလုပျသှားလုပျရငျ အနညျးဆုံး ၂၆သိနျးလောကျ ရမှာမို့လို ပြျောစရာကွီးပေါ့ဗြာ။
(၄) ပွငျသဈနိုငျငံ (France)
ပွငျသဈနိုငျငံ (France) ရဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ဝ,ဝ၇၁ ရှိပါတယျ။ ပွငျသဈနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ ဝနျထမျးတဈယောကျရဲ့ အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁,၆၇၃ (၂,၂၈၁,၄ဝ၃ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ ပွငျသဈနိုငျငံမှာ သာမနျဝနျထမျးလုပျရုံနဲ့ ၂၂သိနျးကြျောရမှာဆိုတော့ ရငျခုနျစရာကွီးပါ။
(၅) နယူးဇီလနျနိုငျငံ (New Zealand)
နယူးဇီလနျနိုငျငံ (New Zealand) ရဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂,၁ဝ၅ အထိရှိပါတယျ။ ဒီနှုနျးထားဟာ ပွငျသဈနိုငျငံထကျ မွငျ့မားပမေယျ့ အခှနျကွေးမွငျ့တဲ့အတှကျ ပဉ်စမနရောမှာ ထားတာပါ။ ဝနျထမျးတဈယောကျရဲ့ အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁,၇၃၆ (၂,၃၆၇,၉ဝ၄ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ နယူးဇီလနျနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျခှငျ့ရရုံနဲ့ အနညျးဆုံး ၂၃သိနျးရမှာနျော။
နယူးဇီလနျနိုငျငံ (New Zealand)
ကဲ . . . . အခုဖျောပွလိုကျတဲ့နိုငျငံတှကေ ကမ်ဘာ့လစာအမွငျ့ဆုံးနိုငျငံ (၅) နိုငျငံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အလုပျအမြားဆုံးသှားလုပျကွတဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံ၊ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဂပြနျနိုငျငံ၊ မလေးရှားနိုငျငံနဲ့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနိုငျငံတှမှော အလုပျသှားလုပျရငျ ဘယျလောကျထိရနိုငျလဲ။
စင်ျကာပူနိုငျငံ (Singapore) မှာ အခွခေံလုပျခ တိတိကကြသြတျမှတျထားတာမြိုး မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ခွှငျးခကျြ (၂) ခုရှိပါတယျ။
(၁) သနျ့ရှငျးရေးဝနျထမျးတှကေို အခွခေံလစာ ဒျေါလာ ၁,ဝဝဝ (၁,၃၆၄,ဝဝဝ ကပျြ) အနညျးဆုံးပေးခရြေမယျလို့ ၂ဝ၁၄ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလကတညျးက သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။
(၂) လုံခွုံရေးဝနျထမျးတှကေို အခွခေံလစာ ဒျေါလာ ၁,၁ဝဝ (၁,၅ဝဝ,၄ဝဝ ကပျြ) အနညျးဆုံးပေးခရြေမယျလို့ ၂ဝ၁၆ခုနှဈ စကျတငျဘာလမှာ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောက စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ သနျ့ရှငျးရေးဝနျထမျး (ဒါမှမဟုတျ) လုံခွုံရေးဝနျထမျး သှားလုပျရုံနဲ့ အနညျးဆုံး ၁၃သိနျးလောကျရနိုငျတဲ့သဘောပါ။
အိမျနီးခငျြး ထိုငျးနိုငျငံ (Thailand) ရဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂,၆၅၂ ရှိပါတယျ။ ဝနျထမျးတှရေဲ့ အခွခေံလစာက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၁ (၃ဝ၁,၄၄၄ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ မွနျမာကပျြ ၃သိနျးနီးပါးရတာဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံထကျစာရငျ ၃ဆနီးပါး ပိုမြားတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံမှာ အခွခေံတဈနာရီလုပျခကို ၈၂၃ယနျး (၉,၉၈၃ ကပျြ) အဖွဈ သတျမှတျထားပါတယျ။ တဈနာရီလုပျရုံနဲ့ အနညျးဆုံးတဈသောငျးနီးပါး ရမှာပါ။ တဈပတျအလုပျခြိနျ နာရီ (၄ဝ) သတျမှတျထားပွီး အခွခေံလစာဟာ ၁၃၁,၆၈ဝ ယနျး (၁,၅၉၇,၂၈ဝ ကပျြ) အထိ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ စင်ျကာပူထကျစာရငျ ဂပြနျနိုငျငံက လစာပိုမြားတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နရောဒသေအပျေါမူတညျပွီး တိုကြိုမွို့ (Tokyo) ၊ ကာနာဂါဝါမွို့ (Kanagawa) နဲ့ အိုဆာကာမွို့ (Osaka) တှမှော အလုပျလုပျရတဲ့ ဝနျထမျးတှကေ လစာပိုမြားပါတယျလို့ သိရပွနျပါတယျ။
မလေးရှားနိုငျငံရဲ့ အခွခေံလစာသတျမှတျခကျြဟာ နရောဒသေပျေါလိုကျပွီး ကှာခွားပါတယျ။ ပငျနီဆူးလားကြှနျး (Peninsula) ပျေါမှာရှိတဲ့ ပွညျနယျတှမှော အခွခေံလစာ ရငျးဂဈ ၁,ဝဝဝ (၃၃၃,၇၅၆ ကပျြ) ပေးခရြေမယျလို့ ၂ဝ၁၆ခုနှဈ ဇူလိုငျလတုနျးက သတျမှတျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆာဘားပွညျနယျ (Sabah) ၊ ဆာရာဝကျပွညျနယျ (Sarawak) နဲ့ ဘာဘူအမျပွညျနယျ (Labuan) တှမှောတော့ အခွခေံလစာ ရငျးဂဈ ၉၂ဝ (၃ဝ၇,ဝ၄ဝ ကပျြ) သာ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ မလေးရှားနိုငျငံမှာ အလုပျသှားလုပျရငျ အနညျးဆုံး ၃သိနျးဝနျးကငျြရနိုငျပါတယျ။
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ (South Korea)
အခုနောကျပိုငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ (South Korea) ကို အလုပျလုပျဖို့ စိတျဝငျစားလာကွပါတယျ။ ကဲ . . . ဒါဆို တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အနညျးဆုံးလုပျခက ဘယျလောကျလဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါပွီ။ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အခွခေံလုပျခကို နှဈစဉျတိုးမွှငျ့လရှေိ့တာပါ။ အခွခေံတဈနာရီလုပျခဟာ ဝမျ ၆,၄၇ဝ (၈,ဝ၉၇ ကပျြ) အဖွဈ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာ သတျမှတျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂ဝ၁၈ခုနှဈရောကျရငျတော့ အခွခေံတဈနာရီလုပျခဟာ ၇,၅၃ဝ ဝမျ (၉,၄၂၃ ကပျြ) ဖွဈလာတော့မှာပါ။ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ တဈပတျအလုပျခြိနျ နာရီ (၄ဝ) သတျမှတျထားပွီး ၂ဝ၁၈ခုနှဈမှာ ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အခွခေံလစာဟာ ၁,၂ဝ၄,၈ဝဝ ဝမျ (၁,၅ဝ၇,၆၈ဝ ကပျြ) ဖွဈပါပွီ။ ကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျရုံနဲ့ အနညျဆုံး ၁၅သိနျးလောကျရမှာဆိုတော့ မကျြစိကခြငျြစရာပါပဲ။
ကဲ . . . . . အခရာပရိသတျကွီးရေ . . ကမ်ဘာပျေါမှာ လုပျခလစာအမွငျ့ဆုံးနိုငျငံတှနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အလုပျသှားလုပျကွတဲ့ နိုငျငံတှမှော သတျမှတျထားတဲ့ အခွခေံလုပျခတှကေို ရှာရှာဖှဖှေေ တငျပွထားတာပါ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြးထဲမှာ နိုငျငံခွားကို အလုပျထှကျလုပျခငျြတဲ့သူတှရှေိရငျလညျး အခွခေံလုပျခအကွောငျးကို လကျတို့ပွောလိုကျပါဦး။
အရပ်အပုဆုံး ဘတ်စ်ကားမောင်းသူအဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ခဲ့သူ Frank Faeek Hachem
မီလျံနာဘဝက ဘီလျံနာဖြစ်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲ
by Kyaw Soe Aung .3hours ago
Pet လေးတွေနဲ့ မတည့်တဲ့အစားအသောက်လေးများ
by Moethae Say . 19 hours ago
MH370 လေယာဉ်ကို ခိုးစီးသူတွေက ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ လေကြောင်းကျွမ်းကျင်သူက ပြောလိုက်ပြီ